Eminyakeni yamuva, imboni yezokudla idale eziningi izithasiselo uthuthukise ukunambitheka kanye eshalofini yokuphila ukudla. Lokhu ezihlukahlukene colorants, nezivimbelakuvunda, amakha kanye, yebo, okokunandisa. Omunye wabo - kuyinto acesulfame potassium, ikhemikhali kuyizikhathi 200 imnandi kunezinyosi ushukela.
It yadalwa eJalimane ngasekupheleni kwawo-60. Nge indalo yayo, wonke bajabula, bekholelwa ukuthi kungenzeka ukuba bangayeki ushukela elimazayo. Ikakhulukazi wayethemba abantu abanesifo sikashukela. Kodwa eqinisweni, lokhu Sweetener bekulokhu yingozi kakhulu. Okumangazayo ukuthi, lapho abantu waqala ukulahla esivuna ushukela esikhundleni, isibalo sabantu okhuluphele liye landa ngendlela emangalisayo.
Izifundo sinqume ukuthi yalolu ketshezi kubangela ukuthuthukiswa izimila kanye nomphumela ongemuhle yisimiso senhliziyo nemithambo yegazi. Nakuba libuye libe isici esihle - ke akakubangeli komzimba, kodwa, njengoba ne amaphilisi amaningi ayebheka Sweetener ingenye eziyingozi kakhulu.
Acesulfame potassium - futhi ezivamile ukudla okufakiwe. It is ukungezwa iziphuzo ezibandayo, ayo, ehla, imikhiqizo yobisi, ushingamu ngisho nemithi kanye wokuxubha.
Kungani-ke okubi ukudla?
acesulfame potassium egxile ngokuphelele umzimba futhi ingakhula ibe nkulu, okubangela izifo ezihlukahlukene. Le into kuboniswa ku umkhiqizo njengoba E 950. Isakhiwo eziyinkimbinkimbi kuhlanganisa okokunandisa kanye esikhundleni ushukela. Igama lezi izithasiselo zokudla "Aspasvit", "Slamiks", "Evrosvit" nabanye. Ngaphandle acesulfame ziqukethe izithasiselo ezifana kungavunyelwe njengoba cyclamate futhi, ngesikhathi esifanayo ngingamenzi kungavunyelwe, kodwa aspartame anobuthi, okungakwazi sishiswa ngenhla degrees 30. Lapho ukufuthelana, ngisho nalapho udle, sekubola ukuba phenylalanine kanye methanol. Lungase ezakhiwe ukusabela we-formaldehyde nge izinto ezithile.
Aspartame - lena kuphela ibhekwa njengengxenye yokudla okunempilo esiye neshaya elimazayo. Ngaphezu kwalokho iziyaluyalu umzimba, futhi lo muzwa ungenza ubuthi. Naphezu kwakho konke lokhu, ke inqwaba yengezwe ukudla eziningi ingane ukudla.
acesulfame potassium, ikakhulukazi lihambisana aspartame, sithuthukisa ukudla kuholela amanzi emzimbeni, okuyinto ngokushesha kubangela ukukhuluphala. Abakwazi kuvuse yisithuthwane ngokulandelana kwawo, ebuchosheni, isifo sikashukela, ukukhathala okungamahlalakhona. Ikakhulukazi ukusetshenziswa kwalo kuyingozi ukuba izingane, iziguli buthakathaka kanye nabesifazane abakhulelwe.
Lezi okokunandisa aqukethe phenylalanine, okuyinto ikakhulukazi yingozi kubantu abanesikhumba esimhlophe futhi ubanikeza ukungalingani hormone. Sekuyisikhathi eside waqongelela emzimbeni, bese kubangela izifo ezimbi nokwenyuka nenzalo.
Uma uthola esiningi lokhu Sweetener noma ukusetshenziswa njalo imikhiqizo elikuqukethe zimpawu ezilandelayo kungenzeka: ubuthakathaka, ikhanda elibuhlungu, isicanucanu, ukucasuka, ubuhlungu bamalunga ngisho nokulahlekelwa inkumbulo, umbono nokuzwa.
Ushukela esikhundleni akuzona kudingekile ukuze abantu abayimiqemane, bona balimaze kuphela. Ngakho-ke kungcono ukuphuza itiye noshukela kuka isiphuzo amnandi carbonated. Uma nizizwa nesaba lapho babe ngcono, ukusebenzisa uju njengoba Sweetener.